Niditra silika ny silicone | honneur
Silicone dia niditra tamin'ny fiainantsika tamin'ny endrika samihafa.
Ampiasaina amin'ny haingon-trano lamaody sy indostria izy ireo. Toy ny elastomera sy ny baoty dia ampiasaina ho an'ny fanaovana adhesive, mpandraharaha mifatotra, tapa-kofehy, tapa-dantelina ary tombo-kase seam. Raha ny tsiranoka sy ny tsimoka dia ampiasaina amin'ny famaranana vita amin'ny lamba, lubricant fibre ary oliva fanolorana.
Ny coating silicone ampiasaina amin'ny akanjo dia manome aina sy mahazo aina. Na eo amin'ny fampiharana indostrialy toy ny fiara automatique, fananganana sy fanatanjahantena, ny kofehy silicone dia manome tanjaka, fanoherana ny mari-pana tafahoatra, ny hamandoana, ny taratra UV ary ny afo.
Ny teknolojia silicone dia nahazo laza teo amin'ny fampiharana ara-teknika sy indostrialy. Amin'ny lamaody, ny lamba vita amin'ny silicone dia manana tombony maro. Afaka mampihena ny fampihenana rano, kirihitra, maimaim-poana, hampiakarana malefaka amin'ny lamba, manana fandehanana rano ambonimbony kokoa. Ny coating silicone amin'ny lamba dia mihazona ny famenoana ny lamba ary tsy ho mora amin'ny hatsiaka na ho simba rehefa tratran'ny hafanana avo.
Mora ny vita amin'ny silicones ary mahomby ny vidiny. Ny silicones dia azo heverina ho tahirin-kevitra mikoriana maimaimpoana, plastika matevina, gels, fingotra, vovo-dronono ary tsiranoka ho manjavozavo noho ny rano na matevina toy ny tenda. Avy amin'ireo karazana silicone ireo, ny vokatra vita amin'ny silicone tsy tambo isaina dia namboarina sy namboarina manerana an'izao tontolo izao ho an'ny tanjona mirehitra sy indostrialy isan-karazany.